साम्राज्ञीलाई निर्माताले अब १६ लाख नै देलान् त ? « Mazzako Online
साम्राज्ञीलाई निर्माताले अब १६ लाख नै देलान् त ?
यो बर्ष अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको २ वटा फिल्म रिलिज भए । मारुनी र रातो टिका निधारमा आफूले करिअरमै गरेको फरक भूमिका भनेर साम्राज्ञी पनि खुशी थिइन् । तर, यी दुबै सिनेमाले हलमा गतिलो कमाई गरेनन् ।
मारुनी र रातो टिका निधारमाको इनिसियल व्यापार कमजोर भयो । मारुनीले वर्ड अफ माउथका कारण राम्रै कमाई पछि गर्यो । तर, यसले मात्र निर्मातालाई पर्याप्त भएन । रातो टिका निधारमाले त उल्लेख्य हल पाउँदा पनि कमाई गरेन । यी दुबै फिल्ममा साम्राज्ञीले सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक वुझेकी थिइन् ।
उनले रातो टिकामा १६ लाख र मारुनीमा १५ लाख लिएको चर्चा भयो । तर, दुबै फिल्म असफल भएपछि साम्राज्ञीले पनि सोच्न पर्ने अवस्था आएको छ । के साम्राज्ञीलाई अब निर्माताले यति नै महंगो रकम देलान् ? या पारिश्रमिक भन्दा पनि कथावस्तु राम्रो भएको फिल्ममा साम्राज्ञीको ध्यान जाला ?